IPort Canaveral yeFlorida yoSuku lweFlorida - Iindidi Zo Zokonakala
IPort Canaveral yeFlorida yoSuku lweFlorida
Iikhasino kuhambo ngolwandle.
Kulabo abanomdla wokuhamba ngokufutshane kwinqanawa, qwa lasela usuku lokuhamba ngenqanawa ePort Canaveral Florida. Le yenye yeendlela zokufumana ubunewunewu bolwandle ngaphandle kokuchitha imali eninzi okanye ixesha lokukhwela.
nini ukutyala iibhalbhu ze-tulip e-ohio
Iindidi zePort Canaveral yeFlorida yoSuku lweFlorida
Ngabantu abangaphezu kwezigidi ezi-4 abakhwela kwiinqanawa kwizikhululo ezintandathu, ePort Canaveral, eFlorida, lelona zibuko lihamba ngesantya esiphambili kwihlabathi.
Sela amaxabiso kwiinqanawa zokuhamba ngenqanawa
Ukuhamba sisiya kwiindawo ezonwabisayo ezinje ngeBahamas, iNtshona yeCaribbean, kunye neMpuma yeCaribbean, le mizila idumileyo yokuhamba ngesikhephe isuka kweli zibuko veki nganye: iCarnival, iRoyal Caribbean neDisney.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukonwabela ukonwaba kunye nokutya ngelixa uhamba ngeelwandle kodwa ungenalo ixesha okanye imali yohambo olude, cinga uhambo oluya ndawo. Bhoda kwiliner eya kukusa elwandle kangangeeyure ezintathu ukuya kwezintandathu emva koko ubuyele kwizibuko elinye kwakhona. Kukho imigca emibini yekhasino onokukhetha kuyo:
Ummeli II weSterling Casino Line
I-Suncruz Casino ye-Suncruz XII
Imigaqo yokudlala yaseFlorida, inqanawa kufuneka ibe ziimayile ezintathu ukusuka elunxwemeni ngaphambi kokuba umdlalo uqale.
Phambi kokuba uBhodi iSterling Casino Line
Ibhodi yasimahla! Ngaba oku kuvakala kuyinyani? Unokumisa imoto yakho simahla. Ukuba ufikile eFlorida ngomoya kwaye awunakho ukufikelela emotweni, kukho Ibhasi iyafumaneka ukukuthatha kwihotele yakho.
Njengalo naluphi na uhambo ngenqanawa, ukubhukisha kukhusela indawo yakho enqanaweni. Qiniseka ukuba uzisa umfanekiso we-ID Ungaqala kule nqanawa kwiTheminali 2B yenqanawa ehamba ngo- 11 AM okanye ngo-7 PM.
I-Sterling Casino, enegunya labantu abayi-1,800, inokunikela okuninzi. Abasebenzi bancomela ukuba unxibe ngokungakhathali kwaye kamnandi; ungashiya ingubo yakho yangokuhlwa kunye nesuti ekhaya.
Ukuhamba ngenqanawe ungadlala imidlalo oyithandayo yekhasino- roulette, blackjack, craps, Caribbean stud poker, isondo elikhulu ezintandathu, kunye ne-mini baccarat. Ngaphezulu kwewaka iindidi zoomatshini bendawo yokubeka izinto ziyafumaneka ukonwaba.
Kwi Show Lounge, uya kuva umculo neemvumi- Starz Kwinqanaba - abajonga kwaye bavakala njengeempawu ezidumileyo zangaphambili, kubandakanya uElvis Presley noMarilyn Monroe. Kwi-Tiki Bar Lounge, mamela umculo wedrama yentsimbi yaseCaribbean, emva koko uhambe kwenye yeendawo ezintlanu eziphangaleleyo ukujonga ulwandle. Olunye ukhetho lubandakanya ukufumana umyalezo okanye ukukhangela kwivenkile yezipho.
Ngalo lonke ixesha lokuhamba ngenqanawa, ungatya uluhlu lwee-buffet zasimahla. Zihambise iinyama, iitshizi, ii-crackers, isonka, iziqhamo, imifuno kunye needyuli ezinikezelwayo. Ipepsi kunye neti ye-iced nayo isimahla. Ukuba ufuna iintlobo ezahlukeneyo, ungathenga ukutya kwigalari yePizza enika ipitsa, izinja ezishushu, iisaladi kunye nesandwich zangaphantsi.
Kulabo baneqela elikhulu okanye abafuna ukubhiyozela ukudibana kwakhona, usuku lokuzalwa, isikhumbuzo, okanye omnye umsitho wokuzonwabisa kwelinye lamagumbi okubuk 'iindwendwe, le liner inokuhlala ukubhukisha iimfuno. Baza kulungiselela ukutya okukhetha kunye neminqweno yakho yokuzonwabisa.
Ngaphambi kokuba uBhodi yeSinCruz Liner
Le liner yekhasino yomthamo womntu inika indawo yokupaka yasimahla yeendwendwe zayo kwindawo ebekiweyo eCove. Kukwakhona nenkonzo yebhasi yokukuhambisa ukusuka kumabala amaninzi ukuya kwisiphelo sendlela. Uyacelwa ukuba uzise i-ID Eli liner livumela abantwana abaneminyaka eli-18 ebhodini, kwaye nangona bengavumelekanga ukuba basele, bavunyelwe ukuba badlale.
Zimbini iihambo ngenqanawa ngosuku, nganye nganye ihlala iiyure ezine. Ungakhwela kwi-11 AM okanye ngo-7 PM.
Yintoni ongayilindela kwi-SunCruz
Kukho oomatshini abangaphezulu kwama-640, kunye neendawo ezine zokudlala. Yonwabela i-blackjack, i-roulette, i-craps, iintlobo ezintathu ze-poker kunye ne-mini baccarat. Ukuba ufuna uncedo lokuqonda indlela yokungcakaza kwisikhephe, funda ezinye iingcebiso ukuze ube nolwazi ngakumbi.
Kukho ukuzonwabisa okwenziwe ngendlela yeVegas, ngomculo omninzi, ngokuqinisekileyo ukukholisa nasiphi na isihlwele.
Isimahla i-you-can-eat buffet ekhazimlayo ibonelelwa kunye nemenyu ye-la-la-carte.
Ngexesha elizayo xa ucwangcisa iholide, cinga ukonwaba kohambo lweenqanawa zasePort Canaveral Florida. Ukuba ufuna uncedo lokufika eFlorida, nxibelelana nearhente yokuhamba ukuze ikukhokele kumalungiselelo akho okuhamba. Iinqwelo-moya ezininzi zinayoamaxabiso ezaphulelo, ukwenza ukuhamba ngenqwelomoya kungabizi kakhulu. Ukongeza kwi-cruise, uza kufumana indawo ezininzi zokubona indawoEFloridaunxweme.
Iindidi Zokudanisa Ukukhulelwa Nokusebenza Ngaphakathi Design Basics Amantombazana Akuqhelekileyo Clothing Abantwana Iincwadi Imiboniso Yeslides
yenza imifanekiso yenyathelo ngenyathelo
yeyiphi ingxubevange yotywala ebulala iintsholongwane
I-betta fish ihleli ngaphezulu kwetanki
indlela yokupheka ubusi obhakiweyo
phina umsila kwi-turkey